गुल्मीका स्थानीय तहमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन – Palpa Samachar
By palpa samachar	 On Sep 2, 2019
हुमाकान्त पोखरेल । गुल्मी
गुल्मीका स्थानीय तहले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन् । गत आर्थिक बर्ष अर्थात आ.व. २०७५,७६ मा जिल्लाका स्थानीय तहले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका हुन् । धुर्कोट गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्ष २०७५,७६ मा २५ लाख राजस्वको लक्ष्य लिएको थियो । तर राजस्व भने २६ लाख ८७ हजार ७६० संकलन भएको छ ।
ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन् गाउँपालिकाका आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन् । त्यसबाहेक मालपोत कर, सिफारिस, व्यवसाय कर लगायतका शिर्षक पनि आम्दानीका स्रोत भएको सुचना अधिकारी इश्वरी भण्डारीले जानकारी दिए । यो आर्थिक बर्षको लागि ३३ लाख आम्दानीको लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कालिगण्डकी गाउँपालिकाले गत आ.व.मा १५ लाख राजस्वको लक्ष्य लिएकोमा ३१ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम गाउँपालिकाले अनुमान गरेकोभन्दा १६ लाख बढी हो । कालिगण्डकीमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, कवाडी सामानको निकासी लगायतका शिर्षकमा राजस्व संकलन हुने गर्दछ ।
गाउँपालिकाले यस आर्थिक बर्ष २०७६,७७ का लागि २५ लाख आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य लिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम पल्लीले जानकारी दिए । मदाने गाउँपालिकाले गत आ.व.मा १२ लाख आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य लिएको थियो । गाउँपालिकाले १५ लाख ८१ हजार ६ रुपैँया ७५ पैसा संकलन गरेको छ । गाउँपालिकाले गत बर्ष लक्ष्यभन्दा ३ लाख ८१ हजार ६ रुपैँया ७५ पैसा बढी संकलन गरेको छ । जसमध्ये सिसाजन्य कवाडी सामग्रीबाट २ लाख, टेलिकमको टावरबाट ४० हजार ५०० संकलन भएको छ । वडा तथा गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सिफारिस, कवाडी सामग्री, विभिन्न किसिमका टेन्डरबाट प्राप्त रकम लगायतका शिर्षकबाट गाउँपालिकालाई आम्दानी हुने सुचना अधिकारी ऋषि पोखरेलले जानकारी दिए ।
यो बर्ष गाउँपालिकाले १५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रुरु गाउँपालिकाले लक्ष्यभन्दा डेढ लाख राजस्व बढी संकलन गरेको छ । आ.व. २०७५÷७६ मा ९६ लाखको लक्ष्य राखेकोमा ९७ लाख ५० हजार संकलन गरेको सुचना अधिकारी इश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले यो बर्ष ८० लाख आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेकोे छ । घर तथा पसलबाट आउने कर गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । त्यसका साथै सिफारिस, मालपोत कर, विभिन्न प्रकारका सुचना तथा टेन्डरबाट पनि गाउँपालिकालाई आम्दानी हुने सुचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए । छत्रकोट गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५,७६ मा २८ लाख ५० हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३० लाख ३५ हजार छ सय ३० रुपैँया संकलन भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले जानकारी दिए ।
उक्त रकम गाउँपालिकाको लक्ष्यभन्दा बढी १ लाख ८५ हजार ६३० बढी हो । यो बर्ष ३१ लाख राजस्वको लक्ष्य राखिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौड्यालले बताए । सम्भावनाका आधारमा राजस्वको लक्ष्य पनि बढी राखिएको उनले बताए । व्यापार, व्यवसाय, ढुङ्गा, गिटी, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, कर लगायतका शिर्षक नै गाउँपालिकाका आम्दानीका स्रोत रहेको पौड्यालले जानकारी दिए ।
भिम अस्पताल भैरहवामा क्षयरोगको जाँच गर्ने जिन एक्सपर्ट मेशिन